नारी भएकै कारण हेपिनु पर्ने कहिलेसम्म ? | KTM Khabar
२०७५ बैशाख १० गते १९:३२ मा प्रकाशित
खै कहाँबाट सुरु गरौ । म सामान्य लेख पढ गर्न सक्ने नारी हुँ । यहीबाट सुरु गरे, साथीहरुले तैले लेख्न सक्छेस् ?, तसँंग अभिब्यक्ति दिने कला छ ? भन्थे । खै त्यो त मलाई थाहा छैन तर नारी माथी भएका घिनलाग्दा घटनाहरु सुन्दा हेर्दा पढ्दा मन भित्र बिद्रोह उत्पन्न हुन्छ ।
पुरुष प्रधान भनिएको हाम्रो समाजमा हामी नारीहरुलाई पुरुषहरुले हेर्ने अश्लिल दृप्टि र नचाहिदा हर्कत देख्दा भित्र भित्रै आगो सल्किन्छ । तर गर्ने के ? पोथि बासेको राम्रो हुदैन भन्ने कुतर्कको दलिल पेश अझै हाम्रै अगाडि गर्छन । शहरीया विद्यालयको दैलो देखेका, चाउरी परेको गालामा अनेक थरी विदेशी लाली र पाउडर पहिरिने बर्गको कुरा गर्ने हैसियत छैन होला तर म जस्ता लाखौ मिडल क्लास परिवारका नारीहरु घरबाट निस्किए पछि कुनै न कुनै रुपमा अपमानित हुनु हाम्रो दैनिकी जस्तै हो भन्दा फरक नपर्ला ।
घरबाट निस्किन नपाउदै केटाहरु सिठ्ठी फुक्छन, जिब्रो पड्काउछन, जिस्काउछन, गहिरो नजर लगाउछन । लाग्छ यो त केटाहरुको दैनिकी हो । अब यो कुरा कसलाई सुनाउने ? आमालाई सुनाउँ तिनीहरुबाट जोगिएर हिड भन्ने उत्तर आउछ । बुबा, दाजु, भाईलाई सुनाउने कुरै भएन । प्रहरीमा जाउ समाज र ईज्जतको त्रास छ । भोली बिबाह नहोला भन्ने डर त्यतिकै छ । अर्को पाटो शिक्षाबाट पनि बन्चित छौ । आफ्नो कमाई छैन । अब भन्नुहोस हरेक नारी कति पिडामा हुन्छिन ।
तर फेरी म पनि त एक पुरुषको नै छोरी हुँ । मलाई सबैभन्दा सुरक्षित महसुस नै बुवा हो भन्ने लाग्छ । दुनियाका अरु छोरीलाई पनि यो लाग्नु स्वभाविक हो । मेरो सबालमा म भाग्यमानी नारी रहेछु । मेरो बुवा, आमा र अन्य परिवारका सदस्यले पढ्नु पर्छ भन्ने संस्कारको प्रतिफल नै हो । आज सामान्य अभिब्यक्ति दिन सक्ने भएकी छु । मैले कति रचनाहरु कपिका पानामा लेख्दै च्यात्दै गरे तर आज मेरो साथिले लेख न, पब्लिस गर्छु भन्दा उहाँ प्रति आभारी छु । मैले मेरो जीवनमा छुटाउदा अपुरो हुने आमा बाबा र मेरो मामालाई सम्झिन्छु । अरु आफन्तको पनि उतिकै हात छ । म लेख्न पढ्न सक्ने हुनुमा, यदि मेरो परिवारले बच्चैमा स्कुल नपठाएर खेल्न र घास दाउरा मात्र गर्न पठाएको र सपोर्ट नगरेको भए म कहाँ यसरी लेख्न सक्ने हुनु नी । कुन जंगलमा बच्चा च्याप्दै घासको भारी हाल्द हुने थिए की, कुनै लोग्ने मान्छेको आशमा जीवन गुजार्दै हुन्थे होला । लाख लाख धन्य छु । मेरो परिवार प्रती मलाई पढ्न सिकाए र यहाँसम्म हिड्न सिकाउने मेरा अग्रजहरुको सधै ऋणि हुनेछु । मलाई थाहा छ, म मेरा अग्रजको गुण तिर्न सक्दिन तर प्राण गर्छु असल बन्ने ।
तर अहिलेको दुनिया त्यस्तो कहाँ रह्यो र ?, यहा त बाबुबाट नै छोरी बलत्कृत भन्ने हेडलाईन पढ्नु पर्छ । अफिसमा हाकिमबाट नै यौन दुब्र्यबहार भन्ने समाचारमा जताततै आउछन् । घर मालिकबाट घरमा काम गर्ने महिलालाई यौन हिंसा भन्दै टेलिभिजनमा बज्छ । अब विचार गर्नुहोस त, यस्तो सुन्दा कुन चार्ही नारीको मन त्रसित नहोला र ?, कहिलेसम्म आश र त्रासमा बाच्ने हामीहरु ?
अफिस जाने पढे लेखेकी नारी अफिस जान्छिन तर उनलाई बाटोमा पनि सेफ फिल नहुने अबस्था आउछ ।
साझँ बिहान बाटोमा केटाहरुले पाएसम्म जिस्काउने, बुढेसकाल लागेका बाबुका उमेरकाहरु पनि हामी बस कुर्न उभिएको ठाउमा नजिकै ल्याएर बाईकको हर्न बजाउछन र लिफ्ट दिउला जस्तो ईशारा गर्छन । जुन हामीलाई जरुरी नै छैन । एउटा उमेर पुगेको बाबु समानको पुरुषको नियत कस्तो अब भन्नुहोस त ? हामीलाई जरुरी छैन, हामीले लिफ्ट मागेका पनि छैनौ तर बाईकको पछाडि बस पुर्याउछु भन्छ किन ?, हो अप्ठ्यारो परिस्थिति छ भने राम्रो नियतले गरेको हो भने त्यस्ता मान्छेहरुलाई सम्मान गर्नु पर्छ । सबैलाई एउटै बास्केटमा हाल्न पनि मिल्दैन ।
म तपाईहरुलाई एउटा दृष्टान्त बताउदै छु । म सामान्य आफ्नै कमाईले धेरै नसके पनि पकेट खर्च जुटाउने नारी हुँ । यो पनि सबै मेरो परिवारको सपोर्टमा । आजभन्दा केहि दिन अगाडि कार्यालयबाट बासस्थान फर्कनको लागि म कमल पोखरीमा बस कुर्दै थिए । साझको लगभग ८ बजेको थियो होला । मसंग जोरपाटी घर भएका बैंकमा नै काम गर्ने भाई पनि बाटोमा भेट भयो । म नजिकै बस्ने हिडेर जादा पनि पुग्थे । तर रात झमक्क परेको र संगै भएको भाईलाई बस कुर्नै पर्ने थियो । उनको टाढा पुग्नु पर्ने भएको कारण बस कुर्न थाल्यौ । मेरो नजिकै आएर बाईकले हर्न बजायो कोही चिनेको हो की भनेर मैले नजर लगाए, अपरिचित लाग्यो । अधबैसे उमेरको मान्छे थियो । वास्ता गरिन फेरि हर्न बजायो र नजिकै आएर भन्यो बैनी कहाँ जाने हो ? मैले भने नजिकै हो । किन सोध्नु भएको अंकल ? भने उनको जवाफ आयो म दक्षिणढोकासम्म जाने हो । बस छैन जस्तो छ, बैनीलाई छोड्दिन्छु । पछाडि बस भन्यो, उ मसंग नितान्त अपरिरिचित थियो । मैले पनि बोली खस्न नपाउदै अंकल मेरो नजिकै हो । मसंगै गाडि कुर्दै गरेका भईलाई औल्याउदै भने, उनको घर जोरपाटी हो उनलाई पुर्याई दिनुस न, भन्न नपाउदै बाईकबाला अंकल हुइकिए । अब बुझ्नु पर्ने कुरा म केटी मान्छे हु । मेरो घर नजिकै छ । मलाई बाईकमा बस पुर्याई दिन्छु भन्छ तर मैले मलाई हैन बस कुर्दै गरेको भार्ईलाई पुर्याइ दिनु भन्दा नमानेर भाग्ने त्यो बुढाको नियत के हो ? असल नियत हो भने त्यो भाईलाई पछाडि राख्न नहुने ? मलाई चाही घर पुर्याउछु भन्ने नियत राम्रो हो त ? महिलालाई टर्चर दिने काम हुन्छन । अब यो सामान्य कुरो कसलाई भन्ने ? पाईला पाईलामा जोगिन जरुरि छ यहाँ ।
कठिन परिस्थितिमा पनि नुनिला आँशुका धारा पिएर दूध पिलाउन सक्ने सृष्टिका संरक्षक हामी नारीलाई, पुरुषको चाकर्नीको नजरले जबसम्म यो समाजले हेर्छ तबसम्म नारी माथि अत्याचार हुन्छ । हाम्रो समाजमा नारीमा चेतनाको ज्यादै आबश्यकता महसुस हुन्छ । नारी सम्बन्धि अप्रिय घटनाहरु पनि प्राय चेतना कै कमिले हुने नै भए । नारीहरु पिडित, प्रताडित हुनुमा अशिक्षाले भुमिका खेलेको कुरा नकार्न सकिन्न । त्यो मैले पनि मान्छु । सबैले मान्नु हुन्छ जस्तो लाग्छ तर शिक्षित र अवसर प्राप्त नारीहरु पनि साच्चै स्वतन्त्र, चेतनशिल कति छन त ?
मैले जति नारीहरु जसलाई शिक्षित भनेर चिन्छु आजभन्दा पहिले उनीहरुलाई म रोलमोडलको रुपमा लिन्थे तर मलाई उनीहरु चेतनशिल लाग्न छाडि सक्यो । उनीहरु एक जोर नयाँ लुगा, गरगहना झपक्क लगाएर पर्फिम साडिमा छर्केर, लोग्नेले किनिदिएको आफ्नो साधानमा सपिङ गर्न पाईयो भने यसैलाई स्वतन्त्रता ठान्छन र अझ भनौ अधिकांश महिला अधिकारकर्मीहरु पनि यहि क्याटोगोरीमा पर्छन जस्तो महशुुस हुन्छ मलाई । जो आफ्नै साधन चढ्छन । जो पब्लिक भेकलसम्म युज गर्दैनन् । बनपाखा, दाउरा, घास केही थाहा छैन । मात्र लोग्ने कमाउने परोस भन्ने र गहना किन्न प्रतिस्पर्धामा उत्रदै लोग्नेलाई प्रेसर दिने उनीहरुबाट सर्बसाधरण गृहणी र म जस्ता नारी विद्यार्थीले आश के गर्ने ? म अर्को कुरा भनौ एउटा लोग्ने मान्छे भ्रष्ट हुनुमा कतै घरकी स्वास्नीको प्रेसरले त हैन ? अरुको देखासेखी गर्ने हामी नारीको बानी सुधार्न जरुरी पनि छ ।
यतिसम्म देख्छु की मेरै शाथीहरु विबाहा हुनुभन्दा अगाडि भएको जब विबाहा पच्चात छोड्छन । त्यतिबेला सोच्दैनन् । ययि पुरुषले धोका दियो भने ? धोका नदेला राम्रै होला तर बजार निस्किएर एक कप चियासम्म खादा लोग्ने कै कमाई खाने प्रबृति जहिलेसम्म बन्द हुदैन, तबसम्म नारी स्वतन्त्र र चेतनशिल हुन सक्दिनन् भन्ने मेरो बुझाई हो ।
यहा नारीलाई हेपिन्छ यो यथार्थ हो समाधान के ? भन्ने महत्वपुर्ण कुरा हो । राष्ट्र प्रमुख नै नारी छिन् । यहा नारी हिंसा जहाँ हुन्छ, त्यहा कडा कारबाही हुने वातावरण श्रृजना हुनु पर्छ । अब हामी नारीहरु लोग्नेको मुख ताकेर हैन, आफै कम्मर कस्नु पर्छ । आमाले छोरी, दिदीले बहिनी, भाउजुले नन्दहरुलाई स्कुल पुर्याउनु पर्छ । आउने जेनेरेशनलाई आत्म रक्षाको निम्ति कराँते छोरालाई मात्र हैन छोरीलाई सिकाउनु पर्छ । घर, अफिस, हाट बजार, पार्क जहासुकै किन नहोस नारी मैत्री वाताबरण श्रृजना हुनु पर्छ । छोरी बिबाह गरेर जिम्मा लगाई दिने जात भनेर सोच्ने बावुहरुको दिमाग परिवर्तन हुनै पर्छ । राष्ट्र प्रमुख छोरी हुने यो देशमा हरेक छोरीहरुले चुचुरो टेक्न सक्छन भन्ने भावना हरेक बुवामा, हरेक दाजुहरुमा हरेक भाईहरुमा हुनु पर्छ । यो मानशिकता विकास गर्न कुन नियम, कानुन, धारा बनाउने हो । त्यस्ता नीति, नियमहरु बनाउँदै महिला विरुद्धको विभेद जराबाट नै समाप्त गर्ने तर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
नेसनल प्याब्सन काठमाडौँ र भिनको आयोजनामा ‘शिक्षक तालिम’ सम्पन्न
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निजी तथा आवासिय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) काठमाडौँ र स्वयंसेवी अभियान नेपाल (भिन) को संय ...
एन प्याब्सन काठमाडौँको ‘वार्षिक साधारण सभा, पुरस्कार वितरण तथा सम्मान कार्यक्रम’ सम्पन्न (फोटोफिचर)
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल ( एन प्याब्सन) काठमाडौँले एन प्याब्सनको २१औँ स्थापना दिवसको अवस ...
रिभेराको ‘वार्षिक खेलकुद महोत्सव’ सम्पन्न (भिडियो)
काठमाडौँ । चावहिल, मैजुबहालमा रहेको रिभेरा इन्टरनेशनल एकेडेमीले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको ‘वार्षिक खेलकुद महोत्सव&rs ...
नेसनल प्याब्सन गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको अध्यक्षमा बाल कुमार गुरुङ (भिडियो)
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निजी तथा आवासिय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको अध्यक्षमा बाल कुमार गु ...